कहाँ कसरी बन्दै छन् प्रदेश सरकार ? « प्रशासन
कहाँ कसरी बन्दै छन् प्रदेश सरकार ?
माओवादी नेता शाहीले एमालेले दलको बैठकपछि खबर गर्ने भनेको, तर अहिलेसम्म खबर नआएकाले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्न नसकिएको बताए । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा विवाद नटुंगिएका कारण मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफलसमेत भएको छैन । स्रोतका अनुसार एमालेले पाउने चार मन्त्रालयमा केपी ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षले दुई–दुईवटा लिने गरी छलफल भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।